ဖူးနုသစ်: မောင်ပေါက်ကျိုင်း (Version 2009 )
Posted by ZT at 8:00 AM
ဟ..... မိုက်တယ်ကွာ.... အရေးအသားက လန်းတယ်။
ဆက်ချင်ရင်တော့ စန္ဒမုခိရဲ့ မျိုးဆက် ဗိသနိုးက ပန်ထွာဘုရင်မ အကြောင်း ဆက်လို့ ရသေးတယ်။ :D
ကောင်းလှချည်လား…ဒေါင်းမြကြည် အဲလေ… ဒေါင်းဇက်တီရယ်။။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်က ယနေ့အညွှန်းချင်ဆုံးမှာ ညွှန်းလိုက်ဦးမယ်…. ပလို့ဂျိ။
အရင်ကတပုဒ်လည်း ကြိုက်တယ်။ ခုပိုစ့်လည်းကြိုက်တယ်။ နောက်ပိုစ့်တွေကိုလည်း မျှော်နေတယ်နော် း)
ဒါနဲ့ စာမေးပွဲရှိတယ်ဆိုပြီး.. ?? (သမိုင်းစာမေးပွဲဖြေမှာထင်တယ်)
ဆက် မိုက်ရန် အားပေးပါသည်။ o.O
ဒါဆို တို ့တွေက ဘီလူး အကန်း တိရိစာ္ဆန် မျိုးဆက်တွေ လားဟင်.. ဘုရား ဘုရား မဟုတ်ပါစေနဲ့း))
တို့ zt က ဒါတွေလဲ ပိုင်သကိုး၊
No One is above the law = No.1 is above the law
Now they said: No man is above the law
အခြားအကြောင်းအရာများ (၂၀၀၉ ဗားရှင်း)ကို စောင့်မျှော်ခွင့်ရှိပါသလားဗျိုး......... :D
ဆက်ရေးပါဗျို့ ... အားပေးတယ် ... ကြိုက်တယ် အရေးအသားတွေကမိုက်တယ်
အရင်တစ်ခေါက်က ပန်းပဲ မောင်တင့်တယ်။ ပြီးတော့ မောင်ပေါက်ကျိုင်း။ ကြိုက်တယ်။ ၁၀ပုဒ်လောက် ရေးပြီးရင် စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်လို့ရပြီ :)
ရှယ်ဘဲ ဆရာ။ သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကို ဒီလိုသာ သင်ရရင်တော့ စာသင်လို့တော်တော်ကောင်းမှာဘဲ ဟိဟိ။
ပြောတော့စာဖတ်နေတယ်။ စာဖတ်နေတယ်နဲ့ ညည့်နက်သန်းကောင်..........
really rocks... cheers
အဖေ နှစ်ယောက်ရှိလို့မို့ ဒွတ္တဘောင်လို့ အမည်တွင်တယ်ကြားဖူးတယ်။ စန္ဒမုခိက ပြည်ထိ ပါလာပုံမရဘူး။ လမ်းမှာတင် စရိတ်ပေးပြန်လွှတ်တယ်တဲ့။ ..ဟဲ ဟဲ.။ ဒါပေမယ့် နောင်တော်ကြီး ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာ ကျုပ်ကြားဖူးတာတွေတော့ မထည့်ပါနဲ့ နောက် ဗားရှင်း အသစ် ထပ်ဖြစ်နေအုံးမယ်။...
ဟယ် ကို ZT မိုက်တယ်ဗျာ
မိုက်တယ်ကွ... တချက်ချက် ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်ရတယ်...
အခုခေတ်အကြောင်းတွေကို တခြားဗားရှင်းတွေ သုံးပြီး ကျဲလိုက်ပါဦး...
ကောင်းတယ်။ အားကြီးကောင်းတယ်။ သမိုင်းကျူရှင်ပြန်ပေးရင် ကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားကြမှာ အမှန်ပဲ။ ဆက်ရန်လုပ်ဦးဗျ။ ကိုကြီးဒွတ်နဲ့ မကြီးဗိတ် တို့အကြောင်း။
စကားကြီး3ခွန်းကို မှတ်သွားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ကတော့ ..ဟဲဟဲ..။ ဖောရှောလဲ တတ်ဝူး..။ ဖတ်လို့တော်တော် ကောင်းတယ် ရှင့်..။
ဒါမျိုးတွေကြောင့် ZT ဖြစ်နေတာ။
ရာဇ၀င္ဆရာေတြ ထိုင္ငိုေလာက္တယ္ း)